लोकप्रिय गाडी कम्प्याक्ट एसयुभी न्यू टेरानोको पोखरामा सार्वजनिक – Sabaikoaawaj.com
लोकप्रिय गाडी कम्प्याक्ट एसयुभी न्यू टेरानोको पोखरामा सार्वजनिक
आइतवार, माघ १४, २०७४ 7:13:48 AM	मा प्रकाशित
गण्डकी धौलागिरी क्षेत्रका लागि निशान ब्राण्डका गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता प्रिमियम मोटर्स प्रा.लि.पोखराले बहुचर्चित तथा विश्वव्यापी लोकप्रिय गाडी कम्प्याक्ट एसयुभी न्यू टेरानोको आज पोखरामा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि यसको आधिकारिक बिक्रेता भने पायोनियर मोटोकर्प रहेको छ ।
न्यू टेरानोमा प्रिमियम डुअल टोन इन्टेरियर, लेदर सिट, कुज कन्ट्रोल, ७.० ईञ्च टच स्क्रीन नेभिगसन, न्यू स्टिरिङ्ग, माउण्टेन÷अडियो÷फोन कन्ट्रोल र वान टच लेन इन्डिकेटर लगायतका २२ नयाँ आकर्षक विशेषताहरु रहेका छन् । एकदमै शक्तिशाली इञ्जिन ११० पि एस (डिजेल टि एच पि) र १.६ लि. (१०४ पि एस) पेट्रोलको लागि रहेको छ । सुरक्षाका लागि डुअल फ्रन्ट एयरव्याग, हिल एस्र्टाट एसिस्ट एविएस, ईविडि, विए र इएस पिको साथमा रहेको छ । न्यू टेरानोमा ६ स्पिड अत्याधुनिक अटो ड्राइभमा पनि उपलब्ध रहेको छ । जसमा गियर सिस्टम कम्प्युटरद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ ।शानदार बनोटका साथै यस गाडीका आन्तरिक सजावट असाध्यै आकर्षक रहेका छन् । आजकलका युवा पुस्तालाई लक्षित गरिएको टेरानोले ग्राहकवर्गलार्य स्मार्ट र वोल्डको अनुभूति गराउनेछ । न्यू टेरानोको मूल्य रु.४२,९९,००० देखि ५३,९९,००० सम्म उपलब्ध छन् । १ हजार ५ सय सिसीको डिजेल इन्जिनयुक्त टेरानो भर्खरै मात्र नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ । छिट्टै नै १ हजार ६ सय सिसीको पेट्रोल इन्जिनयुक्त टेरानो पनि नेपाली बजारमा उपलब्ध हुँदैछ ।
निशान टेरानो एकदमै उत्कृष्ट इञ्जिनियरिङ, आकर्षक र बलियो डिजाईनमा निर्माण गरिएको छ । यसमा उपलब्ध सुविधा र यसको वनावटले जुनसुकै किसिमको सडकमा पनि आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ । यो गाडीमा २०५ मि.मि. को उच्च ग्राउण्ड क्लिरेस, सानो ठाउँमा पनि मोड्न सकिने ५.२ मि.को त्गचलष्लन च्बमष्गक र १९.६४ कि.मि.÷प्रतिलिटर सम्मको ईन्धन खपतले गर्दा नयाँ निसान टेरानोमा सुनमा सुगन्ध थपिदिएको छ ।निशानको ग्लोबल प्रधान कार्यालय जापानको योकोहोमा रहेको छ । यहाँबाट ६ क्षेत्र एशियन र आशिनिया, अफ्रिका, मध्य पूर्व र भारत, चीन, यूरोप, ल्याटिन अमेरिका र उत्तर कोरियाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दछ । निशानको विश्वव्यापी रुपमा २,४७,५०० स्टाफ रहेका छन् । मार्च १९९९ देखि फ्रान्सेली रेनल्टसँगको साझेदारीमा रेनल्ट निशान एन्यान्समा आवद्ध रहेको छ ।
कारमा ७ इन्चको नेभिगेसन टच स्क्रिन राखिएको छ । जसमा युएसबी कनेक्सनमार्फत मोबाइलका सबै एप्लिकेसन चलाउन सकिन्छ । म्युजिक सिस्टमलाई स्टेरिङमा रहेको बटनबाटै चलाउन सकिन्छ । ड्यासबोर्ड इन्टेलिजन्स र क्याची छ । स्टेरिङमै राखिएको बटनबाट भ्वाइस कन्ट्रोल सुविधा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि मोबाइललाई ड्यासबोर्डमा रहेको मल्टिमिडिया फन्सनसँग ब्लुटुथबाट कनेक्सन गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्टेरिङमा रहेका बटन थिचेपछि सिस्टमले के गर्न खोजेको हो भनेर सोध्छ । चालकले जसलाई फोन गर्नुपर्ने हो, उसको नाम भनेपछि सिस्टमले आफैँ फोन डायल गरिदिन्छ र चालकले सजिलै कुराकानी गर्न सक्छन् । कारको अगाडिको सिट एड्जस्ट गर्न मिल्छ । ५ वटै सिट लेदरका छन् । पछाडिको सिटमा कप होल्डर राखिएको छ ।कारमा एन्टि ब्रेकिङ सिस्टम (एबिएस) उपलब्ध छ । टेरानोमा थप सुरक्षित यात्राका लागि कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक ब्रेकिङ सिस्टम (इबिडी) सुविधा पनि दिएको छ । जसले ब्रेकको चापलाई सबै पांग्रामा समान हिसाबले वितरण गरी ब्रेकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछ । ड्राइभिङका लागि उकालो र ओरालो कठिन मानिन्छ । तर, टेरानोमा उकालो–ओरालो यात्रालाई सहज बनाउन ‘हिल स्टार्ट एसिस्ट’ सुविधा छ ।
जसले उकालो र ओरालोमा कारलाई समान गतिमा दौडाउन मद्दत गर्छ ।उत्पादक कम्पनी निसान मोटरले १ वर्ष अथवा २०,००० कि.मि.को वारेन्टी उपलब्ध गराए पनि नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्पले २ वर्ष अथवा ५०,००० किमीको वारेन्टी उपलब्ध गराएको छ । प्रिमियम मोटर्स प्रा.लि.ले स्थायी शोरुम उत्तमचोकमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र हाल पोखराको न्यूरोडबाट कार्यालय सञ्चालन भईरहेको छ । यस कम्पनीले ठुलो लगानीमा पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर विस्तार गर्दैछ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ १४, २०७४ 7:13:48 AM